Martinika: Ny Mafaitra Taorian’ny Nandefasana ilay Fanadihadiana Mikasika An”Ireo Andriana Farany” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2018 17:42 GMT
Hatramin'ny nandefasana tamin'ny 6 Febroary, ny fanadihadiana farany mikasika an'ireo Békés, Ireo andriana farany tao Martinika, dia sahala amin'ny notetezinà onja sosiolojika ireo Antilles frantsay.
Ireo manam-pahaizana ao an-toerana sahala amin-dry Raphaël Confiant, teo amin'ny vohikala an'ny vondrom-piarahamonina Montray Kréyol, ireo mpanao politika sy ireo mpanao gazety toa an'i Gilles Dégras, teo amin'ny vohikala Bondamanjak, dia samy namoaka ireo taratasy misokatra maneho ny fahatairana, ny alahelo ary ny fanalàm-baraka tsapan'ireo Martinika marobe tsy Békés, taorian'ny nahitàna ilay fanadihadiana. Nofintinin'i Gilles Dégras ny lahatsorany tamin'ny fanitrikitrihana ny fiandrasana fialantsiny:
Ankehitriny, Andriamatoa Despointes, manana fahafahana hanakana ny fipoahan'io baomba izay nofaritanao fa matanjaka lavitra noho ny an'ny “Hiroshima” io ianao. Eny, baomba ara-tsaina io, napalm ara-drafitra. […] tsotra fotsiny no angatahako aminao, amin'ny anaran'ny foko béké, dia ny hanehoanao fialantsiny mahitsy amin'ireo vahoaka martinika ary indrindra amin'ireo taranaka andevo
Tsara ny manamarika, sahala amin'ny nataon'i Bondamanjak, fa na ireo mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina Béké aza dia maniry hanisy elanelana manoloana an'ireo teny nataon'i Despointe.
Na izany aza, takian'ny mponina martinika bebe koka ny hanaovana fialantsiny sy valy bontana afantoka aminà zotra telo:
1. Ny zo
Eto i Alain Huyghes Despointes, mpanoratra an'ireo tonony izay mahabe adihevitra, dia amim-pireharehàna no anehoan'ny Fikambanana martinika ho an'ny fampiroboroboana ny orinasa azy:
Andriamatoa Alain HUYGHUES DESPOINTES, mpisavalalana ny orinasa tao Martinika, dia nasandratra ho eo amin'ny laharan'ny Chevalier de la Légion d'Honneur araka ny didy aman-dalàna navoakan'ny Filohan'ny Repoblika frantsay tamin'ny 13 jolay 2005.
Teraka tamin'ny taona 1926 tao Fort de France, ity raimpianakaviana 5 anaka nampiana-tena ity, ankehitriny no lohan'ny vondron'ireo orinasa valo ao Antilles Guyane mampiasa olona manodidina ny 550.
Ity lanonana nomen'ny Repoblika frantsay ity dia lohahevitra iray mitondra hatezerana ho an'ny ankamaroan'ireo Martinika, izay manasokajy an'io valisoa io ho tena faran'izay tsy mifanaraka amin'ny toerana misy an'i Despointes amin'ireo olana ara-poko sy ny fanandevozana. Tamin'ny taona 2001, mikasika an'io olana io, nampitovian'i Frantsa tamin'ny heloka bevava manohitra ny maha-olombelona ny fanandevozana, tamin'ny alalan'ny fandaniana ny lalàna mitondra ny anaran'ny solombavambahoaka goianezy iray: ny lalàna Taubira.
Tamin'ny herinandro lasa teo, mpisolovava martinika iray, notohanan'ny mpampanoa lalàna, no nanapaka hevitra ny hampiditra raharaham-pitsaràna hanenjehana an'Andriamatoa Despointes noho ireo teny nataony, afaka adika ho mpanavakava-bolonkoditra sy mpandala ny fanandevozana. Nandrisika ny vahoaka izy mba hanaraka ny ohatra nasehony. Ireo vohikala Montray Kréyol sy Bondamanjak no manazava an'ireo zotra arahana mba hahazoana mitondra olona hiatrika fitsaràna
2. Ny toekarena
Nisafidy fomba fanoherana hafa ireo sasany, lasa malaza kokoa tato anatin'ireo fotoana farampatany tany amin'ireo Antilles frantsay. Fibodoana ara-toekarena izany. Farahamientana iray tao amin'ny vohikala Vmaker, Maracudja eo amin'ny vohikala Le Post ary Marie-Josée Tirolien-Pharaon avy amin'ny blaogy Le petit lexique colonial, ireo rehetra ireo miantso fibodoana ny vonron’ireo indostria mitambatra tantanan'Andriamatoa Despointes.
3. Ny Fisiana ara-batana
Hatramin'ny 1848 nanafoanana ny fanandevozana, ireo Békés no niaina lavitra an'ireo ambiny tao Martinika, nanodidina ny farihy iray mitoka-monina antsoina hoe Cap-Est, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe “firenena Béké”. Nandefa lahatsary iray antsoina hoe Tongasoa eto Cap-Est, ny tranonkala Bondamanjak, fakàn-tahaka maneso an'ilay fanadihadiana iray malaza ankehitriny Les derniers maîtres de Martinique, miaraka amin'ny mozika lafika Welcome to Jamrock [amin'ny fiteny anglisy] an'i Damian Marley. Maneho ny hasosorana tsapan'ireo Martinika ilay hira, manoloana an'ireo tranobe mihezinezina, ireo fiarakodia sy ireo sambo ao Cap-Est, izay mariky ny harembe an'ireo Békés. Sahala amin'ny tena efa mahatsapa na miahiahy mihitsy ny fivadihan'ny toedraharaha ny vondrom-piarahamonina Béké. Milaza ny lahatsoratra iray vao haingana teo amin'ny Bondamanjak fa, nangatahan'ireo Békés ny hanaovan'ny polisy fanarahamaso eo amin'ny faritra misy azy.